Muhiimada Ganacsigu U Leeyahay Bulshada - Daryeel Magazine
Muhiimada Ganacsigu U Leeyahay Bulshada
Waxaan halkan ka salaamaya Bahda Qurbo Magazine iyo akhristayaasha ee ku nool daafaha dunida. Bacdal salaan waxaan xoogaa ka hadli doonaa muhiimada ganacsiga .
Ganacsigu waa habka is waydaarsiga Alaab ama Adeeg kaas oo lagu kala badalanayo lacag ama wax u dhigma, ujeedadiisuna tahay in laga helo faa,ido faa’idadaas oo labada dhinacba helayaan , kaas oo u dhexeeyaan hal qof ama wax ka badan , ganacsiga waxa ka faa’ida laba dhinac , Mar waxa faa’idaya ka wax iibinaya oo wuxuu helayaa lacagta dulsaarka ee loo yaqaan Faa’ido, Marna waxa faa’idaya qofka wax iibsanaya oo wuxuu ku manaafacaadsanayaa wixii uu iibsaday ama waxa meesha ka baxaysa baahidii uu qabay.
Ganacsigu waa shay muhiim u ah bulsho kasta oo dunida ku nool, waana shayga maanta dunida kala wada ama isku xidhay, dunida aynu nool nahay qarniyo ka hor la isma aqoon , oo wadankastaa wuxuu isku haystay inuu kaligii jiro , dadaal badan , karti badan , naf badan oo ku baxday , dhaqaale badan oo ku baxay , ayaa qaaradba qaarad heshay, wadanba wadan helay, taasna waxa sababtay baahida ganacsi ee loo qabay dadka ku noolaa meelkasta oo dunida ah.
Ganacsigu waa shay u baahan dhamaan qodobada kala a ah:—
Ganacsigu waa shay cidkastaa u baahan tahay , waa shay ku shaqeeya baahida bulshada, waxaanu xoogaa saaraa sidii uu qancin lahaa qofkasta oo nool , kalana soo bixi lahaa jeebkasta lacagta ku jirta, ganacsiga oo imika sababaya in nolosha ibnu aadanka ka dhigo mid fudud oo waxkasta lagu qaban karo bilaa hawl.
Ganacsigu sidiisaba wuxuu noqdaa laba midkood
Ganacsi la iibiyo alaab (GOODS) la taaban karo sida , gaadiid, dhar, cunto, iyo qalab.
Ganacsi la bixiyo Adeeg ( SERVICE), sida shirkadaha isgaadhsiinta ama shirkadaha cargo ama (Logisticska) , rayiislayaasha, gaadiidka, kuwaas oo hawl kuu qabanaya kuuna fudaydinaya hawlo aad u baahnayd Ujeedadooduna ay tahay faa’ido doon.
Sida aynu wada ognahay shaqada ganacsigu sideedaba waxay ku xidhan tahay baahi taas oo dadka ganacsadayaasha ahi markasta xooga saaraan sidii ay baahi kasta oo jirta u dabooli lahaayeen, si ay iyaguna bulshadii u siiyaan wixii ay rabeen , bulshadiina u hesho wixii ay rabeen.
Ganacsigu wuxuu leeyahay Faa’idooyin fara badan kaas oo aynaan soo koobi Karin bal hadana wax baan ka taataaban doonaa:—–
1: in laga helo dhaqaale oo ah ujeedada kooowaad ee loo abuuro.
2: in lagu barto bulsho kala duwan sida macmiil, iyo shirkadaha alaabta keena.
3: in laga helo shaqaalaysiin badan.
4: in laga helo waayo-aragnimo balaadhan.
5: in laga helo sumcad iy magac
Marka aynu ka hadlayno gayiga somalida waxa buuxa fursado ganacsi oo aad u badan laakin u baahan maalgalin iyo fikir saliim ah.
Ganacsigu wuxuu faa’ido u leeyahay dawlada, bulshada, iyo dhamaan cidkasta oo baahi qabta.
Markasta oo aad rabtid inaad noqotid qof ganacsi bilaabaya waxa lagama maarmaan ah inaad niyada ku haysid su,aasha ah waa maxay baahida saxda ah ee ka jirta suuqa (Current demand in the market target) marka aad ogaato ayaad waxaad qaadanaysaa shaqadada ganacsi ma waxay noqonaysaa mid adeeg bixisa mise mise alaab iibisa haddii aad tahay mid ka ganacsata alaabta , ma waxaad u iibinaysaa si tafaariiqa mise si jumlada. Haddii aad adeeg bixinaysidna adeegaagu ma wuxuu noqonaya mid markasta shaqaynaya mise mid wakhti gaara shaqaynaya.
Ta ugu muhiimsan ee aad markasta xooga saaraysaa waa inaad heshid macmiil , macmiilkuna waa lafdhabarta ganacsiga, hadaad macmiilkaaga gancisid oo aad keentid wuxuu u baahan yahay, wuu guulaysan ganacsigaagu, hadaadse gancin kari waydid, macmiilkaaga waad ku fashilmid.
Markasta oo aad ganacsi bilaabaysid waxa lagama maarmaan ah , inaad niyada ku haysid inaad la kulantid FAA’IDO IYO KHASAARE LABADABA, maxaa yeelay markasta waxaad ku cusub tahay ganacsigii , waxaad la kulmaysaa dhib badan , taas oo u baahan inaad yeelatid aqoonta xalinta dhibaatooyinka ganacsiga.
Markasta oo aad ganacsi bilaabaysid waxaa waajib ah inaad noqotid PRICE TAKER oo macnaheedu yahay inaad qaadatid qiimaha ka jira suuqa haddii kale oo aad ka badisid qiimaha suuqa ka jira waxa suuro gal ah inaad kacdid waliba si dhaqso ah.
Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed yar iyo waynba noqda kuwo ku hamiya inay samaystaan ganacsi , inay maamulaan ganacsi, waayo waxa aad ka helaysaan wixii aad rabtaan, waxa aad ka helaysaan magac, waxa aad ka helaysaan sharaf, laakin ha noqdo ganacsi xalaala oo si xalaala u shaqeeya.
Insha marka xiga waxa aynu soo qaadan doonaa ganacsiyada waaweyn ee ka jira dalka iyo sida ay ku bilaabmeen iyo heerka ay imika marayaan.
Qormooyinkani waxay noqon doonaan qormooyin ganacsi oo xooga saari doona ganacsiyada kala duwan ee ka jira dalka guud ahaantii.
Ganacsigu waa furaha horumarka iyo shaqo abuurka.
Muhiimada Baamiyuhu uu u Leeyahay Hooyada Uurka Leh Iyo Dadka Macaanka Qaba Muhiimada Lowsku U Leeyahay Caafimaadka Lafaha Caruurta Muhiimada Vitamin D-gu U Leeyahay Dumarka Uurka Leh & Ilmaha Caloosha Ku Jira